लवलेटरहरु: Love Letters
Posted on September 29, 2010 Author sarosem	Comment(0)
कम्प्युटर अपरेटरको प्रेमपत्र
जिन्दगीकी कन्ट्रोल प्यानल, हन्ड्रेड जिबीको माया ! मैले १एमबी मायााको लागी कतिपटक एप्लाई गरेँ, तर कहिल्यै पनि ओ.के. गरिनौ । तिम्रो पिक्चर मेरो हार्डडिस्कमा सेभ गरिसकेको छु । कृपया मेरो मायालाई रिसाइकलबीनमा सेन्ड नगरिदेउ । मेरो रिकोएस्ट मानिनौं भने, म आफैंलाई अटो डिलिट गर्नेछु , अगाडी तिम्रो इच्छा !!
तिम्रो जिन्दगीको पासवर्ड ‘ गोपाल’
पहिलो पटक खप्परध्वज |nepali joke